धनकुटाको पाख्रीवासमा जारी मेयरकप – आज भएको ४ खेलमा कुन-कुन टीमले जित हाँसिल गरे ? हेर्नुहोस् « Dhankuta Khabar
धनकुटाको पाख्रीवासमा जारी मेयरकप – आज भएको ४ खेलमा कुन-कुन टीमले जित हाँसिल गरे ? हेर्नुहोस्
धनकुटा खबर, माघ २७ । धनकुटाको पाख्रीवासमा जारी वडा स्तरिय दोश्रो मेयरकप फुटवल प्रतियोगिता अन्तर्गत आज ४ खेल भएका छन् ।
आज विहान पाख्रीवास ५ र ७ वीच भएको पहिलो खेलमा ० को विरुद्ध २ गोल लगाउदै पाख्रीवास ७ ले जित हाँसिल गरेको छ । वडा नं ७ को जीत का लागि जर्सी नं १० का खेलाडी सुरज राईले ३३ औ मिनेटमा १ गो गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए । त्यसपछि खेलको ५० औ मिनेटमा जर्सी नं ९ का खेलाडी सुचन राई थप अर्को गोल गर्दै ७ नं वडालाई जित दिलाएकाहुन् । यो खेलमा वडा नं ५ का कुनैपनि खेलाडीले गोल फर्क्याउन सकेनन् । यस खेलको म्यान अफ दि म्याच वडा नं ५ का जर्सी नं १ का गोल किपर खीम मगर घोषित भए ।
त्यस्तै गरी वडा नं ८ र १० वीच भएको दोश्रो खेलमा २-३ गोल अन्तरले वडा नं ८ ले विजयी हाँसिल गरेको छ । ८ नं वडाको जितका लागि जर्सी नं १० का सुशान्त राईले ९ औ मिनेट मै गोल गर्दै आफ्नो टिमलाई अग्रता दिलाए । त्यसपछि जर्सी नं ७ खेलाडी कुशल भण्डारीले २७ औ र ५० औ मिनेटमा थप २ गोल लाएका थिए । यी दुई वडा वीचको खेलमा वडा नं १० का लागि जर्सी नं ७ का असिम राई र जर्सी नं ४ का खेलाडी उज्वल भण्डारीले क्रमश: २९ औ र ४४ औ मिनेटमा १/१ गोल फर्क्याए पनि हार टार्न सकेनन् । यो खेलको म्यान अफ दि म्याच वडा नं ८ जर्सी नं ६ (१५) का खेलाडी विद्वान राई घोषित भए ।
त्यस्तैगरी वडा नं १ र ३ वीच दिउँसो भएको तेश्रो खेलमा ० को विरुद्ध ३ गोल लगाउदै वडा नं ३ विजयी भएको छ । ३ नं वडा को जीतका लागि जर्सी नं ३६ का पेम्वा तामाङ,जर्सी नं १० का अनिम राई,जर्सी नं १६ का सिद्धान्त राई ले क्रमश: ३, २८ र ३२ औ मिनेटमा समान १/१ गोलको योगदान गरे । यी दुई वडा वीचको खेलमा वडा नं १ का जर्सी नं ९ का खेलाडी र कोचले पहेलो कार्ड पाएका थिए । यो प्रतियोगितामा कोचले पहेलो कार्ड पाएको यो नै पहिलो पटक रहेको प्रतियोगिताका मुख्य रेफ्री महेष मल्लिकले जानकारी दिनुभयो । यस खेलको म्यान अफ दि म्याच वडा नं ३ का जर्सी नं ३४ का खेलाडी हेम वहादुर कटुवाल घोषित भएकाछन् ।
त्यस्तै आजको चौथो तथा अन्तिम खेलमा पाख्रीवास २ र ४ भि,डेका थिए । यी दुई वडा वीचको खेलमा १-५ गोल अन्तरले वडा नं ४ ले विजयी हाँसिल गरेको छ । ४ नं वडा को जीत का लागि जर्सी नं ११ का खेलाडी विनोद वुढाथोकीले ११ औ र १७ औ मिनेटमा २ गोलको योगदान गरे भने जर्सी नं ८ का सुरेन्द्र गुरुङले २८ औ,जर्सी नं १० का खेलाडी देवेन्द्र भट्राईले ३० औ र जर्सी नं ६ का खेलाडी मनित गुरुङले (६० प्लस ३)६३ औ मिनेटमा समान १/१ गोल गरेका थिए । यो खेलमा वडा नं २ का लागि जर्सी नं १७ का खेलाडी विकास क्याप्छाकीले मात्र १ गोल फर्क्याए वाहेक अन्यले गोल हान्न सकेनन् । यसको म्यान अफ दि म्याच वडा नं २ का जर्सी नं १ का गोल किपर खेमराज मगर घोषित भए ।
आज भएको प्रत्येक खेलका म्यान अफ दि म्याच लाई नगर प्रमुख वृष वहादुर राई लगायतले सम्मान स्वरुप ट्रफी प्रदान गर्नुभएको थियो । नेपाल भ्रमण वर्षलाई समेत लक्षित गर्दै गत २४ गते देखी पाख्रीवास नगरपालिकाको आयोजनामा जारी वडा स्तरिय फुटवल प्रतियोगिताको विजयी प्रथम समूहले नगद रु १ लाख ५१ हजार सहित ट्रफी मेडल र प्रमाण पत्र पुरस्कार पाउनेछ भने दोश्रो हुनेले नगद ७५ हजार ५ सय सहित ट्रफी मेडल र प्रमाण पत्र पुरस्कार पाउनेछ । प्रतियोगिताको फाईनल खेल फागुन २ गते हुने छ ।
धनकुटा खबर । कोरोना संक्रमण र त्यसको रोकथामका लागि सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण
धनकुटा खबर । नजिकिदै गरेको चाडबाडलाई मध्यनजर गरी आज धनकुटा जिल्ला प्रहरी कार्यालय
धनकुटामा दीप-प्रज्वलन गर्दै मनाईयो संविधान दिवस
धनकुटा खबर । संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको आज ५ वर्ष पूरा भएको